Sidee Ayay Bayern Munich Uga Faa,iidaysan Kartaa Maqnaanshaha Real Madrid? – Kooxda.com
Home 2018 April Jarmalka, Spain, Wararka Maanta Sidee Ayay Bayern Munich Uga Faa,iidaysan Kartaa Maqnaanshaha Real Madrid?
Sidee Ayay Bayern Munich Uga Faa,iidaysan Kartaa Maqnaanshaha Real Madrid?
April 30, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
In ay wakhti dambe timaado ayaa ka fiican in ayna imanba waa kalmadaha ka dhex guuxaya maskaxda xiddig kasta oo kooxda Bayern Munich ah xilli ay isku diyaarinayaan in ay qabtaan shaqo aan macquul ahayn walib aad u adag.
Kooxda Bayern Munich ayaa u safri doonta Madrid iyaga oo la ciyaari doonaa Los Blancos lugta 2-aad ee semi-finalka champions league.
Lugtii hore ee semi-finalka ayaa ku dhamaatay guul ay gaartay Real Madrid waliba iyada oo ka baxsan garoonkeeda taas oo xaalka ku adkaynaysa kooxda ku guulaystay horyaalka Germany.
Bayern Munich ayaa kulanka soo galaysa iyada oo ay ka maqan yihiin xiddigaha ugu muhiimsan kooxdeeda kana mid yihiin Jérôme Boateng,Arturo Vidal iyo Arjen Robben halka ay Bayern Munich ka maqnaan doonaan xiddigaha Dani Carvajal iyo Isco oo shaki weyn ku jiro.
Hadaba sidee ayay Bayern Munich uga faa,iidaysan doontaa maqnaanshaha kooxda Real Madrid?.
Qaab ciyaareedka Fiican Ee Franck Ribéry Oo Fursad siin kara Bayern Munich:
Dani Carvajal ayaa ku dhaawacmay kulankii Lugtii hore ee labada kooxood waxana uu Zidane go,aansaday in uu daafaca ka ciyaarsiiyo xiddiga Lucas Vasquez.
Qaab ciyaareedka Franck Ribéry iyo waliba soo laabashada Alaba ayaa kooxda Bayern Munich siin kara fursada ugu fiican ee ay uga faa,iidaysan karaan maqnaanshaha Carvajal.
Sidoo kale soo laabashada Alaba ayaa kooxda Bayern Munich ka caawin karta in ay cadaadis weyn saaraan garabka midig taas oo u noqon karta booska ay guusha ka gaari karaa.
Tayada Corentin Tolisso:
Tababaraha Kooxda Bayern Munich ayaan si fiican uga faa,iidaysan tayada xiddiga reer France ee Corentin Tolisso lugtii hore semi-finalka waxana la gaaray wakhtigii uu ku bilaabi lahaa ciyaarta.
Corentin Tolisso ayaa kooxda siin kara xal weerar oo fiican laakiin waa in uu garabka bidix ka ciyaarsiiyo xiddiga James Rodriquez garabka midigna ka ciyaarsiiyo Franck Ribéry taas oo kooxda Bayern Munich ka caawinaysa in ay weerar badan qaado khatarna galiso xiddigaha khadka dhexe ee Real Madrid iyo daafacabada.
Kubadaha Madaxa ah:
Bayern Munich ayaan ka faa,iidaysan tayada Robert Lewandowski kulankii hore iyada oo ayna xiddiga reer Poland u tagayn kubado madax ah.
Waa in uu tababaraha kooxdu u sheego xiddigihiisa in ay kubada badan oo madax ah u dhigaan Robert Lewandowski si uu uga faa,iideeyo kubadahaas isaga oo isticmaalaya tayadiisa madaxa.
Cristiano Ronaldo Oo Aan Qaab Fiican soo Bandhigin:
Xiddiga 1-aad ee kooxda Cristiano Ronaldo ayaan soo bandhigin qaab ciyaareed fiican kulankii lugtii hore laakiin hadana isaga ayaa wali ah hubka ugu khatarsan ee Real Madrid.
Ronaldo oo mar kale soo bandhiga qaab xun ayaa kooxda Bayern Munich ka caawin karta in ay kulanka natiijo wax ku ool ah kala baxdo
Filed in: Jarmalka, Spain, Wararka Maanta
Nabil Fekir Oo Si Maldahan U Muujiyay In Uu Ku Biiri Doono Kooxda Liverpool.